Lufthansa inobudirira kupedzisa kupedzisa kwekuwedzera kwemari
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Lufthansa inobudirira kupedzisa kupedzisa kwekuwedzera kwemari
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Deutsche Lufthansa AG yakadzorera zvizere huwandu hwemamirioni 1.5 bhiriyoni anotorwa kubva kuSilent Participation I yeEconomics Stabilization Fund yeFederal Republic yeGerman (ESF).
Kuwedzera kwemari yeLufthansa kwakapedzwa - masheya matsva ari kutengeswa kubva nhasi.
Zvinotorwa kubva mukuwedzera kwemari zvinoyerera zvakanangana nekubhadhara mari yekusimbisa yeGerman Economic Stabilization Fund (ESF).
Kubhadharwa kwakazara uye kudzimwa kweESF Silent Participations I na II vakaronga gore risati rapera.
Nekupedzisa kwanhasi kwekuwedzera kwemari Deutsche Lufthansa AG yakabhadhara zvizere huwandu hwemamirioni 1.5 emadhora akatorwa kubva kuChinyaradzo Kutora Chikamu I cheiyo Yehupfumi Yekusimudzira Fund yeFederal Republic yeGerman (ESF). Naizvozvi, Deutsche Lufthansa AG yakagadzirisa chikamu chakakura chezvino nhanho dzakamira dzekusimudzira dze ESF. Iyo yekudzorera yakaitwa zvakanyanya kumberi pane pakutanga zvakarongwa.
Carsten Spohr, CEO weDeutsche Lufthansa AG
Iyo yakazara mari yekuwedzera kwemari yakaenzana ne2.162 bhiriyoni euros. Iwo matsva matsva ari kutengeswa paFrankfurt Stock Exchange kubvira nhasi. Iko kuwedzera kwemari saka kwapera.
Carsten Spohr, CEO we Deutsche Lufthansa AG anoti:
“Tinotenda zvikuru kuti Deutsche Lufthansa AG yakagadzikiswa nemari yemutero mune yakaoma nguva. Izvi zvaita kuti zvikwanise kuchengetedza anopfuura mabasa zviuru zana uye kuzvichengetedza ramangwana. Nhasi, tiri kuchengeta chivimbiso chedu uye kubhadhara chikamu chakakura chemari yekudzikamisa pamberi pekutarisirwa. Tiri kuwedzera kuvimba nezve ramangwana. Nyika zhinji uye zhinji dziri kuvhura miganhu yavo, uye kudiwa kwekufamba nendege, kunyanya kubva kune vafambi vebhizinesi, kuri kukura zuva nezuva. Zvakangodaro, nharaunda yendege dzinoramba dzichinetsa. Ndosaka tichienderana mukuenderera mberi neshanduko. Chinangwa chedu hachina kuchinjika: iyo Lufthansa Boka ichaenderera mberi nekuchengetedza nzvimbo yayo pakati pemapoka epamusoro mashanu endege. "
Kutevera kuripwa kwanhasi kweKunyarara Kutora Chikamu I, Kambani inodawo kubhadhara zvizere Chinyararire Chekutora Chikamu II chemabhiriyoni euros kupera kwa1 uye kugumisa chikamu chisina kushandiswa cheKunyarara Kutora chikamu iniwo kupera kwa2021 kusati kwaitika. Chikwereti cheKfW che 2021 bhiriyoni euros yakange yabhadharwa kare zvisati zvarongwa (Kukadzi 1). Iyo ESF, iyo yava kubata 2021% yemugove capital, yakazvipira kusatengesa chero migove mukambani mumwedzi mitanhatu zvichitevera kupedzwa kwekuwedzera kwemari. Nekudaro, kutengeswa kwedanda kuri kuzadzikiswa pasati papera mwedzi makumi maviri nemana mushure mekupedzwa kwekuwedzera kwemari, chero bedzi Kambani yabhadhara Chikamu Chinyararire chekutora I ne II sezvakange zvakarongwa uye kuti zvido zvebvumirano zvinozadziswa.